Tag: makwikwi | Martech Zone
Kupesana nekutenda kwakakurumbira, kushambadzira midhiya enhau hakusi kungoenderana nezvako zvinyorwa online. Iwe unofanirwa kuuya nezviri mukati zvinogadzira uye zvine simba - chimwe chinhu chinoita kuti vanhu vade kutora matanho. Zvinogona kuve zvakapusa kunge munhu achigovana yako posvo kana kutanga shanduko. Zvishoma zvinodiwa uye makomendi hazvina kukwana. Ehe, chinangwa ndechekuenda kuhutachiona asi izvo zvinofanirwa kuitwa kuti zvibudirire
Chii chinonzi Kukura Kupaza? Heano gumi nemashanu Matekiniki
Chishanu, January 15, 2021 Chishanu, January 15, 2021 Douglas Karr
Izwi rekuti kubiridzira kazhinji rine chirevo chisina kunaka chakabatana nacho sezvo chichireva kuronga. Asi kunyangwe vanhu vanokanganisa zvirongwa havasi kugara vachiita chimwe chinhu chisiri pamutemo kana kukuvadza. Kubiridzira dzimwe nguva kunoshanda kana nzira pfupi. Kuisa pfungwa imwechete kushambadziro inoshanda futi. Ndiko kukura kwekubira. Kukura kwekuba kwakatanga kushandiswa kune vanotanga avo vaida kuvaka ruzivo nekutora… asi vasina bhajeti rekushambadzira kana zviwanikwa zvekuzviita.
Maitiro Ekudzivirira Kubiridzira mune Yako Inotevera Online Contest
Chipiri, June 21, 2016 Douglas Karr
Tichave tichivhura yekutanga yemakwikwi mazhinji munguva pfupi yekukwezva vamwe vashanyi kumaemail tsamba edu. Kunyange isu tiine yakakura budiriro zviwanikwa, hapana imwe nzira yekuti isu tichava tichikudziridza makwikwi isu pachedu. Tiri kuzoshandisa Hellowave, mupi wemakwikwi pamhepo. Sei? Chikonzero chekutanga: Kubiridzira ndichave akatendeseka uye ndinobvuma zvachose kuti ndakabiridzira mumakwikwi epamhepo. Makore apfuura, isu takave nemakwikwi enharaunda enhau enhau kuti tiwane iyo